Ukufaka isicelo selayisense iMassachusetts Cannabis yisinyathelo sokuqala noma yimuphi usomabhizinisi we-cannabis ohlala esifundeni se-bay okufanele asinakekele. Abenzi bomthetho baphasise umthetho wokungcebeleka wensangu ngoJulayi ka-2017.
ICannabis Control Commission (CCC) inesibopho sokumemezela imithethonqubo ephathelene nensangu, ukucubungula izicelo zebhizinisi nokukhishwa kwamalayisense, nokwakha izinqubomgomo nezinqubo “ezikhuthaza futhi zikhuthaze ukubamba iqhaza okugcwele embonini yensangu elawulwayo ngabantu abavela emiphakathini ebikade ilinyazwe ngokungenakulinganiswa ngokunqatshelwa kwensangu nokuphoqelelwa kanye nokuthinta kahle leyo miphakathi.
Izinhlobo Zamalayisense E-Massachusetts Cannabis
Ilayisensi Yokulima Insangu. Umlimi Wensangu angalima, acubungule futhi apake insangu, ukuze adlulisele futhi ahambise imikhiqizo yensangu ezikhungweni zensangu, kodwa hhayi kubathengi. Kunezinhlobo eziyishumi nambili zamalayisense okutshalwa kwensangu ngokuya ngosayizi wombhede umfakisicelo angawusebenzisa:
Isigaba 1: kungafika kokungu-5,000 sq Isigaba 7: 50,001 kuya ku-60,000 sq. Ft
Isigaba 2: 5,001 kuya ku-10,000 sq. Ft. Isigaba 8: 60,001 kuya ku-70,000 sq. Ft
Isigaba 3: 10,001 kuya ku-20,000 sq. Ft Isigaba 9: 70,001 kuya ku-80,000 sq. Ft
Isigaba 4: 20,001 kuya ku-30,000 sq. Ft Isigaba 10: 80,001 kuya ku-90,000 sq. Ft
Isigaba 5: 30,001 kuya ku-40,000 sq. Ft Isigaba 11: 90,001 kuya ku-100,000 sq. Ft
Isigaba 6: 40,001 kuya ku-50,000 sq. Ft
Ubuciko Bokubambisana Nensangu. Uhlobo loMlimi Wensangu olungalima, luthole, lukhiqize, lucubungule, lupakishe nemikhiqizo yensangu nemikhiqizo yensangu ukuletha insangu eMarijuana Establishments, kodwa hhayi kubathengi. Ukuze ufake isicelo salolu hlobo lwelayisense, kuzodingeka ube neqembu eliqukethe:
Izakhamizi zaseMassachusetts ezisungule inkampani enesikweletu esilinganiselwe, ubambiswano lwesikweletu esilinganiselwe, noma inkampani yokubambisana;
Ibhizinisi lingaba nelayisense elilodwa kuphela le-Craft Marijuana Cooperative;
Amalungu eCraft Marijuana Cooperative kungenzeka angabi nentshisekelo yokulawula kunoma iyiphi enye insangu;
I-Craft Marijuana Cooperative ayigcini kwinani elithile lezindawo zokulima, kepha kukhawulwe kumbhalo ophelele wamamitha-skwele ayi-100,000 nezindawo ezintathu zemisebenzi egunyazwe abakhiqizi bemikhiqizo yensangu;
Ilungu elilodwa leCraft Marijuana Cooperative kumele ngabe lifake ifomu lentela leSheduli F (elibika imali engenayo yasepulazini) eminyakeni emihlanu edlule.
ICraft Marijuana Cooperative kumele isebenze ngokuya ngemigomo eyisikhombisa yokubambisana eyashicilelwa yi-International Cooperative Alliance ngo-1995.
Umenzi Wensangu Yomkhiqizo. Umakhi womkhiqizo wensangu uyigunya eligunyaziwe ukuthola, ukukhiqiza, ukucubungula nokupakisha insangu nemikhiqizo yensangu, ukuletha insangu nemikhiqizo yensangu ezikhungweni zensangu nokudlulisela insangu nemikhiqizo yensangu kwezinye izikhungo zensangu, kepha hhayi kubathengi.
Umthengisi Wensangu. Umthengisi Wensangu uyinhlangano egunyaziwe ukuthenga nokuletha insangu nemikhiqizo yensangu eMarijuana Establishments futhi ithengise noma ngenye indlela idlulisele imikhiqizo yensangu kanye nensangu eMarijuana Establishments nakubathengi.
Insangu Transporter. I-Marijuana Transporter iyinhlangano engahambisa kuphela insangu noma imikhiqizo yensangu lapho lokho kuthutha kungagunyaziwe ngaphansi kwelayisense yokuSungulwa kwensangu uma ilayisensi njenge-Marijuana Transporter:
I-Transporter Yesithathu: Ibhizinisi elibhaliswe ukwenza ibhizinisi eMassachusetts elingenayo enye ilayisense yokuSungulwa kweMarijuana ngokuya ku-935 CMR 500.050 futhi alibhalisiwe njengemithi yezinambuzane ebhalisiwe ngokuya ku-105 CMR 725.000.
Umthumeli welayisense okhona: Ukusungulwa Kwensangu okufisa ukwenza isivumelwano nezinye izikhungo zensangu ukuhambisa imikhiqizo yabo yensangu kanye nensangu kwezinye izikhungo zensangu.
Isikhungo Sokucwaninga Insangu. I-Marijuana Research Facility iyisikhungo semfundo, inhlangano engenzi nzuzo noma inkampani yasekhaya noma ibhizinisi eligunyaziwe ukwenza ibhizinisi kwiCommonwealth yaseMassachusetts. Isikhungo Sokucwaninga Insangu singalima, sithenge noma ngenye indlela sithole insangu ngenhloso yokwenza ucwaningo maqondana nemikhiqizo yensangu kanye nensangu. Noma yiluphi ucwaningo olubandakanya abantu kumele lugunyazwe iBhodi Yezokubuyekeza Yezikhungo. Isikhungo Sokucwaninga Insangu kungenzeka singathengisi insangu esiyitshalile.
Insangu Microbusiness. A Microbusiness is a co-located Tier 1 Marijuana Cultivator, and / or Marijuana Product Manufacturer limited to purchase 2,000 pounds of marijuana from other Marijuana Establishments in one year.
Umnikazi welayisensi ye-Microbusiness ngeke abe nesabelo sobunikazi kunoma yikuphi ukusungulwa kwensangu futhi iningi labaphathi bayo noma amalungu kumele ngabe babeyizakhamuzi zaseMassachusetts isikhathi esingaphansi kwezinyanga eziyi-12 ngaphambi kokufaka isicelo kufanelekile ukufaka isicelo selayisense ye-Microbusiness.
ISIQONDISO ESIQALILE: I-NANOTECHNOLOGY KU-CANABIS: YINI INZUZO?
Isinyathelo sokuqala sokufaka isicelo selayisense iMassachusetts Cannabis ukuhambisa imali yesicelo selayisense - ezokwehluka kuye ngohlobo lwelayisense ozofaka isicelo kulo- nakuzo zontathu (3) izingxenye zohlelo:
Ukuhlola Okungemuva, kanye
Iphrofayela Yokuphatha Nokusebenza.
Isigaba ngasinye sidinga ukuthi abafakizicelo banikeze imininingwane eyiyo mayelana nebhizinisi, abantu ngabanye kanye nezinhlangano ezihambisana nebhizinisi futhi bakhombise ukuqonda, nezinhlelo zokuhambisana nemithetho yeKhomishini eqondene nohlobo lwelayisense lomfakisicelo, indawo, nesikali. Izicelo zamalayisense abantu abadala nezokusetshenziswa kwezokwelapha zinezidingo ezifanayo ngokuhlukile okuvezwe ezigabeni ezilandelayo.
Ukusetshenziswa Kwenhloso (i-AOI) kudinga ukuthi umfakisicelo adalule Abantu noma Amabhizinisi Anokulawulwa Okuqondile noma Okungaqondile esicelweni sabo selayisense. Abantu noma Amabhizinisi Anokulawulwa Okungaqondile kusho noma yimuphi umuntu noma ibhizinisi elilawula ngokungaqondile ekusebenzeni kwe-ME noma i-MTC. Ifaka phakathi noma yimuphi umuntu onentshisekelo yokulawula enkampanini engaqondile noma enkampanini yomenzi wesicelo, kanye nomphathi omkhulu kanye nomqondisi ophethe walezo zinkampani, noma omunye umuntu noma inhlangano esesimweni ngokungaqondile sokulawula ukwenziwa kwezinqumo zensangu Ukusungulwa (ME) noma isikhungo sokwelashwa kwensangu (MTC).
Abafakizicelo bayakhuthazwa ukuthi bafake abantu abalawula ngokunikela ngezinsizakalo. Isibonelo, umuntu angahle alawule ngokwenza izinqumo mayelana nokuphathwa kokusungulwa noma ukusebenza. Abafakizicelo abadingi ukudalula abantu abahlinzeka ngezinsizakalo futhi abangenakho ukulawula. Isibonelo, abafakizicelo abadingi ukudalula ababonisi ababonayo kepha abathathi izinqumo kusikhungo.
Kulesi sigaba, bonke abafakizicelo kuzodingeka badalule futhi bahambise okulandelayo:
Izintshisekelo Ezingaphandle Kwezwe
Isibopho noma i-Escrow
Umazisi Wempahla Nemibhalo Yenzalo
Bamba Isitifiketi Sesivumelwano Somphakathi
Isifakazelo Somhlangano Wokufinyelela Emphakathini Nemibhalo
Hlela Ukuhlala Uhambisana Nemithetho Yasendaweni
Hlela Ukuthi Ube Nethonya Elifanele Abantu Abalimele Ngokungenakulinganiswa
Kulesi sigaba sohlelo lweMassachusetts Cannabis Application, bonke abafakizicelo kumele babhale bonke abantu nezinhlangano ezifanele kanye nakho konke ukudalulwa kwangemuva namafomu okugunyazwa. Umuntu ngamunye noma ibhizinisi elisohlwini loMfakisicelo wesigaba senhloso nalo lizofakwa kuhlu kusigaba Sokuhlola Okungemuva. Abantu kanye nezinhlangano zizohlolwa ngokujulile ngemuva futhi abantu bazohambisa ukuhlolwa kwezinhlamvu zeminwe.
IKhomishini kudingeka ukuthi yenze isinqumo sokufaneleka kwelayisense yomuntu ngamunye kanye nebhizinisi elisohlwini lwesicelo, esisekelwe, ngokwengxenye ekuhloleni okungemuva. Ukuhlolwa kwangemuva kuzobandakanya, kepha kungagcini lapho, ukubuyekezwa kokulandelayo:
Amarekhodi e-database yolwazi lobugebengu eMassachusetts
Amarekhodi e-database yaseMassachusetts 'nakazwelonke, kufaka phakathi amarekhodi obuchwepheshe nawomsebenzi;
Ukubandakanyeka komuntu ngamunye nebhizinisi kwamanye amabhizinisi ahlobene nensangu; futhi
Noma yiziphi izinyathelo ezithathiwe ngokumelene nanoma iyiphi ilayisense noma ukubhaliswa okuphethwe ngumuntu noma inhlangano.
Ngaphezu kwalokho, bonke abafakizicelo kuzodingeka ukuthi badalule imininingwane elandelayo:
Incazelo yanoma isiphi isenzo sobugebengu, noma ngabe ngamacala obugebengu noma okuyiphutha, okuholele ekulahlweni, ukulahlwa kwecala, ukunxenxa, noma ukuvuma amaqiniso anele;
Incazelo yanoma isiphi isenzo somphakathi, kufaka phakathi izenzo ezihlobene nomsebenzi wobungcweti, wokusebenza, noma wokukhwabanisa;
Incazelo yanoma isiphi isenzo sokuphatha, kufaka phakathi izenzo ezihlobene nokusebenza kwensangu kwezokwelapha- noma kwabantu abadala;
Incazelo yanoma isiphi isenzo sokuqondiswa kwezigwegwe esithathwe kunoma iyiphi indawo ephathelene nelayisense, ukubhaliswa, noma isitifiketi esiphethwe yilowo muntu noma ibhizinisi, njengokumiswa noma ukuhoxiswa, kufaka phakathi, kodwa kungagcini lapho, ilayisensi yokunquma noma yokusabalalisa izinto ezilawulwayo; futhi
Incazelo yanoma yikuphi ukwenqatshwa kwelayisense.
Abafakizicelo akudingeki ukuthi banikeze imininingwane mayelana nanoma yikuphi ukulahlwa okuye kwavalwa noma kwasuswa ngumyalelo wenkantolo.
Iphrofayela Yokuphatha Nokusebenza
Imininingwane edingekayo njengengxenye yalesi sigaba iyinkomba yokuthi umfakisicelo uyaziqonda izidingo zomthetho zokusebenzisa i-ME, kufaka phakathi imithethonqubo yeKhomishini, inezinhlelo eziqondene nohlobo lwelayisense lomfakisicelo, indawo kanye nesikali. futhi uzokwazi ukusebenza ngendlela esemthethweni.
Ukuze kuhanjiswane nalesi sigaba sesicelo selayisense iMassachusetts Cannabis, bonke abafakizicelo bazodinga ukuhlinzeka ngokulandelayo:
Imininingwane Yezebhizinisi, Imibhalo Yenhlangano, kanye Nemithetho yedolobha
Izitifiketi Zokuma Okuhle
Uhlelo lwebhizinisi, Uhlelo Lomshuwalense Wezikweletu, kanye Nesikhathi Esiphakanyisiwe
Isifinyezo Sezinhlelo Zokusebenza, Izinqubomgomo Nezinqubo
Izidingo ezingeziwe zezinhlobo ezithile zelayisense
Ngaphezu kwazo zonke izidingo ezibalulwe ngenhla, abafakizicelo bamalayisense eMassachusetts Cannabis kuzofanela bahambisane nezimfuneko ezengeziwe ngokuya ngohlobo lwelayisense abalicelayo. Uma ufuna eminye imininingwane maqondana nalokhu, ungahlala njalo xhumana nochwepheshe ngakho-ke bangakunika isandla ngale nqubo eyinkimbinkimbi.
ISIQONDISO ESIQALILE: INDLELA YOKUVULA IKHAMPANI YOKUTHOLA I-CANABIS EMASSACHUSETTS
Ziyini izindleko zelayisense yaseMassachusetts Cannabis?
Ukuze uthole ilayisense yaseMassachusetts Cannabis, abafaka izicelo zelayisense njenge-ME abananani elincane lemithombo yezimali okumele ikhonjiswe. Kodwa-ke, abafakizicelo abafuna ukuba yi-MTC kumele bakhombise izinsizakusebenza zemali eyi- $ 500,000 kuhlelo lwabo lokuqala kanye ne- $ 400,000 eyengeziwe kwesicelo sesibili nesesithathu.
Kodwa-ke, kufanele sigcizelele ukuthi lokhu kumane kuyimfuneko emincane yemali, futhi asikho isizathu sokuthi kungani ungafanele uhlele imali ethe xaxa ukuze usethelwe ilayisense. Ngalo mqondo. Ngalo mqondo singancoma noma ngubani ofaka isicelo se-ME ukuthi ahlose ama- $ 250,000 - $ 1,000,000 ngokuya ngohlobo lwelayisense abangayifuna ngenkathi ama-MTCs kufanele ahlose ama- $ 750,000 noma ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, bonke abafakizicelo kudingeka babeke eceleni, kungaba ngebhondi noma nge-akhawunti yokuqashwa kwemali, inani lemali elanele ukumboza ukuqedwa nokuqedwa kwe-ME noma i-MTC. Inani elibekelwe eceleni kufanele lanele ukumboza izindleko zokwanelisa noma yiziphi izibopho zentela yokuthengisa ezivelele zombuso noma zomasipala, izindleko ezitholwe ukuthola indawo yomnikazi welayisensi, nezindleko ezitholakale ekubhujisweni kwensangu nemikhiqizo yensangu ohlwini lwayo.
Uma ofaka isicelo ethola ibhondi, umfakisicelo kudingeka ukuthi abeke eceleni inani eliphelele lemali yakhe yamalayisense njengoba kubekiwe ku-935 CMR 500.005 noma ku-501.005, noma ngabe imali ikhishiwe. Uma umfakisicelo esungula i-akhawunti ye-escrow, umfakisicelo kumele abeke eceleni okungenani ama- $ 5,000 futhi uyakhuthazwa ukuthi abeke eceleni inani eliphelele lemali yabo yamalayisense, noma ngabe imali ikhishiwe.
Uma ofaka isicelo ethola ibhondi, ibhondi kufanele iveze okulandelayo:
ICommonwealth of Massachusetts Cannabis Control Commission, 2 Washington Square, Worcester, MA, 01604, yisibopho;
Inhloso yesibopho ukukhokhela noma yiziphi izindleko ezenziwe yiKhomishini ukwanelisa noma yiziphi izibopho zentela yokuthengisa ezivelele zombuso nezasekhaya, izindleko ezitholwe ukuvikela noma iyiphi insangu enelayisense, izindleko ezitholakale ukubhubhisa insangu nemikhiqizo yensangu ohlwini lwayo, nokumboza ezinye izindleko ezenziwe iKhomishani noma lowo obenikezwe igunya lokuqeda noma ukuvala isikhala somnikazi welayisensi ngokuhambisana nezinqubomgomo nemithetho yokuphatha.
Uma ofake isicelo esungula i-akhawunti ye-escrow, i-akhawunti kufanele iveze okulandelayo:
ICommonwealth of Massachusetts Cannabis Control Commission, 2 Washington Square, Worcester, MA, 01604, iyona kuphela ehlomulayo; futhi
Amaphuzu Ayisihluthulelo kumthetho waseMassachusetts Cannabis
Ikhaya likhula eMassachusetts?
YEBO, Umthetho uvumela umuntu oneminyaka engaphezu kwengama-21 ubudala ukuba akhule aze afike ezitshalweni eziyisithupha ekhaya lakhe.
Ukulingana Komphakathi eMassachusetts Insangu Imithetho?
Imibandela Engaphansi Ebhekiswe Kwezobulungiswa Bokubuyisela Esimeni:
Imibandela Yokulingana Komphakathi? YEBO
Ingxenye Yentela Eyabelwe Imiphakathi Ethintekayo? YEBO
Imithetho Yokuthola Insangu eMassachusetts
Ungaba ne-ounce elilodwa ngaphandle noma ama-ounces ayi-1 ekhaya
Amalayisense atholakala eMassachusetts
Ilayisensi Yokulima Insangu.
Ubuciko Bokubambisana Nensangu.
Umenzi Wensangu Yomkhiqizo.
Isikhungo Sokucwaninga Insangu.
ISIQONDISO ESIQALILE: AMANZI SOLUBLE CBD